​ऋषि धमलाकी श्रीमती आफैले बनाएको फिल्मकी नायिका बन्ने
काठमाडौं । पत्रकार ऋषि धमला आफ्नी पत्नी एलिजा गौतम अब नायिका बन्ने भएकी छिन् । मोडलिङ गर्दा गर्दै धमलाले उनलाई विवाह गरेका थिए । एक अन्तर्वार्ताको क्रममा धमलाले उनलाई नायिका बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
नायिका बन्नको लागि एलिजा आफैंले एक फिल्म निर्माणको तयारी....
को बाहिरिएला नेपाल आइडलको टप ५ बाट ?
इटहरी । पहिलो पटक नेपालमा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरकोे रियालिटी शो नेपाल आइडल अन्तिम चरणमा पुगे सँगै अब को बाहिरिएला र उपाधि कसले पाउला भन्ने विषय सबैको चासोको विषय बन्दै गएको छ । बिहिबार भएको टप ५ मा सबैले आफ्नो तर्फबाट निकै नै दमदार तरिकाबाट प्रस्तुति देखाए....
​जुनले खोजिन सोझो पति ( भिडियो सहित )
इटहरी । आज नेपाली हिन्दु नारीहरुको महान चाड हरि तालिका तिज आज हिन्दु नारीहरु बिहानै उठेर स्नान गरि भगवान शिवको पुजा आरधनागरि निराहार ब्रत बसेका छन् । ताप्लेजुङ्ग जिल्लामा जन्मिएकी जुनु प्रसाई पनि आज सोझो पति पाउँ भनेर भगवान शिवको पुजा आरधनागरि विहानैदेखि निराहार ब्रत....
२ रुपैयाँमा लाउरेको इन्ट्री
इटहरी । भाद्र २३ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउँने फिल्म २ रुपौयाँको टाइटल ओ.यस.टी. सङ्गको च्यासल स्थित सुटिङ स्टुडियोमा सुटिङ गरिएको छ ।
र्यापर आसिश राना लाउरे, एड्रे, र ब्याकग्राउण्ड स्कोरर तथा म्युजिक कम्पोजर रोहित शाक्य भिडियोलाई उत्कृष्ट बनाउन तल्लीन थिए । र्यापरहरुले र्याप हानिरहदा....
१७ जना विवाहित महिलाहरु सहभागी प्रतियोगितामा सबैलाई कुनै न....
​एपीवानको लागि प्रकाश सुब्बाको ‘हाउस पार्टी’
इटहरी । टेलिसिरियल हाउस पार्टीको सुभ मुहुर्त गरिएको छ । दृश्य दर्शन प्रोडक्सनले उत्पादन गर्न लागेको टेलिसिरियल हाउस पार्टीको शुभ मुहुर्त गरिएको हो ।
टेलिसिरियलको लेखन तथा निर्देशन कलाकार प्रकाश सुब्बाले गरेका छन् भने सहायक निर्देशन सरोज केसीले गरेका छन् । सामाजिक विषयवस्तुलाई आधार....
​चलचित्र ‘जोनी जेन्टलमेन’ को ट्रेलर सार्वजनिक
काठमाडौं । चलचित्र ‘जोनी जेन्टलमेन’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । चलचित्रमा पल शाह र आँचल शर्माको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ बाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका पल शाह युवापुस्तामाझ लोकप्रिय छन् । पल र आँचलका साथमा यो फिल्ममा....
​प्रजिता भइन् २०१७ को मिस टिन पूर्वाञ्चल
धुलाबारी । झापा बिर्तामोडकी प्रजिता पाठक मिस टिन पूर्वाञ्चल २०१७ को विजेता भएकी छिन् । बिर्ता मिडिया एन्ड इन्टरटेन्मेन्ट प्रालि र धुलाबारी जेसीजले आयोजना गरेको मिस टिन पूर्वाञ्चलको शनिबार धुलाबारीमा सम्पन्न फिनालेमा पाठक विजेता भएकी हुन् ।
२६ जना प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै पाठक विजेता बन्न....
​पहिलेकी मनिषा, अहिलेकी मनिषा (फोटो फिचरसहित)
धरान । बलिउडकी चर्चित नायिका मनिषा कोइराला यतिखेर नेपालमा धेरै देखिन्छिन् । क्यान्सरको उपचार पछि उनी अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रकी दूत झै भएकी छिन् । उनी स्वास्थ्य चेतना जगाउँदै विभिन्न ठाउँमा देखिने गरेकी छिन् । सोही क्रममा उनी केही साताअघि सुनसरीको धरानमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा सहभागि....